သီတင်းကျွတ်လပြည့် ( အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့) ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » အထွေထွေ » သီတင်းကျွတ်လပြည့် ( အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့)
သီတင်းကျွတ်လပြည့် ( အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့)
By နေမင်းမောင်3:30 AM1 comment
…ဆီမီးရယ်ထိန် ၊ အိုင်မင်းရေကြည်က .. ၊
…ကြာငါးမည် ငုံအာစွင့်တယ်.. ၊ ဖူးပွင့်ချိန်ခါ .. ။
…အဿဝဏီ ယှဉ်ကာချဉ်းပါလို့ .. ၊ လင်းလာတဲ့ ငွေတာရိန်ရယ်.. ၊
…ပြာမှိန်လျက် မြူချေဆိုင်း .. ။
…ဂါရဝေ ၊ သဒ္ဒါခြွေ ကန်တော့ပွဲကိုလ .. ၊
…မစဲပေါင် ကုသိုလ်နှိုးကြတယ် .. ၊ မျိုးမြန်မာတိုင်း ………… ။
သီတင်းကျွတ်လသည် မြန်မာတို့ ၏ ၁၂ လရာသီတွင် သတ္တမမြောက်လဖြစ်ပြီး ၀ါတွင်းကာလ၏ နောက်ဆုံးလဖြစ်ပါသည် ။ ရာသီခွင်မှာ တူရာသီ ဖြစ်ပြီး အဿဝတီ ကြယ်နှင့် လမင်းတို့ စန်းယှဉ်ကာ မွန်းတည့်ကြသည် ။ ရာသီပန်းမှာ ကြာဖြူပန်း ( Nymphaea Lotus ) ဖြစ်ပါသည် ။
သီတင်းကျွတ်လကို ရှေးမြန်မာကျောက်စာများ၌ `သန္တူလ´ ဟုရေးထိုးကြသည် ။ ချိန်ခွင်ပုံ ကြယ်တာရာ နက္ခတ်တို့စုဝေးသော မိုးကာလဟု လည်းကောင်း ၊ တောင်သူလယ်သမားတို့ စိုက်ပျိုးထားသောစပါးပင်များ သန်စွမ်းစွာထောင်မတ်သောလ ဟု လည်းကောင်း ပညာရှိများ ဖွင့်ဆိုကြပါသည် ။မြန်မာတို့ သည် စိတ်ရင်းရိုးသားတည်ကြည်ကြသူများ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ စစ်မှန်သော ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို ပုဂံခေတ် အနော်ရထာမင်းတရား နှင့် ရှင်အရဟံ တို့ ၏ ကျေးဇူးတရားကြောင့် ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခွင့် ရကြပြန်သောအခါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ၏ အဆုံးအမ တရားတော်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာ အေးချမ်းပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော လူနေမှု ဘ၀များဖြင့် လောကဓံတရားများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်သော ၊ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်တတ်သော စိတ်နှလုံးကို ခေတ်အဆက်ဆက် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည် ။
ဤစိတ်ဓာတ်များ အရင်းခံဖြင့် ၁၂ လရာသီရှိသည့် အနက် လပြည့်လကွယ် နေ့ တိုင်းတွင် ရတနာ သုံးပါးအား ရည်စူး၍ အလှူအတန်းများ ၊ ကောင်းမှု ကုသိုလ်များ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည် ။
သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော်သည် မြန်မာတို့ ၏ ၁၂ ရာသီ ပွဲတော်များတွင် ထင်ရှားသောပွဲတော် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပွဲတော်စတင်ကျင်းပခဲ့သည် အစဉ်အလာမှာ ဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှား ရှိခဲ့စဉ် အခါကပင် ဖြစ်ပါသည် ။
ထိုအခါ သမယတွင် ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ က မီးရှူး မီးတိုင်များ ၊မီးပန်းများ၊ ဆီမီးများ ၊ဆွမ်းပန်းရေချမ်း များဖြင့် ကပ်လှူပူဇော်ကြသည် ။ တာဝတိံသာနတ်ပြည်ရှိ စူဠာမဏိ စေတီတော်ကိုလည်း ပူဇော်သည့် အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် မီးပုံးများပြုလုပ်၍ ကောင်းကင်သို့ လွှတ်တင် ပူဇော်ကြသည် ။ထိုကဲ့သို့ ပူဇော်ကြသည်ကို အကြောင်းပြုကာ ယနေ့ ခေတ်အခါတိုင်အောင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၌ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်မြဲ ဖြစ်သည် ။
ဗုဒ္ဓ ၏ အဆုံးအမ၌ တည်ကြသော မြန်မာတို့ သည်အသက်ဂုဏ်ဝါကြီးသူ ၊ မြင့်မြတ်သူတို့ အပေါ်တွင် ငယ်သူ ၊နိမ့်ကျ သူတို့ က ရိုသေလေးစား၍ ပူဇော် ကန်တော့လေ့ရှိကြသည့်အတိုင်း ၀ါကျွတ်သော အချိန် ဤထူးမြတ်သော အခါသမယတွင် တတ်နိုင်သမျှ ပူဇော် သက္ကာရတို့ ဖြင့် သက်ကြီးဝါကြီးများ ၊ မိဘဆရာများကို ပူဇော်ကန်တော့ကြ၏ ။
ထို့ အပြင် ဤအချိန်ကာလသည် မြန်မာတို့ ၏ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရိုသေလေးစားတတ်သောသဘော ၊မာန်မာနကို နှိမ့်ချတတ်သော သဘော ၊ အပြန်အလှန် မေတ္တာစေတနာထားတတ်သောသဘော စသည့် အမျိုးကောင်း သားသမီးတို့ ၏ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ သော စိတ်နေစရိုက် ကိုဖော်ကျူးပြသနေသော အမျိုးဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးနေသည့် ရိုးရာ အစဉ်အလာ အချိန်အခါ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကျွန်တော်၏ အစ်ကို၊အစ်မ များ ညီငယ် ညီမငယ်များအားလုံးတို့ သည်လည်း ..`ကောင်းသောအကြံ ၊မှန်သောအကျင့် ၊သင့်သောအယူ ၊ဖြူသောနှလုံး ´ တို့ ဖြင့် သီတင်းကျွတ်လ မီထွန်းပွဲတော်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ပါဝင်ဆင်နွဲ နိုင်ကြပါစေ..ဟု ဆုတောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်..။
ကိုဇော်ဇော် ဘလော့မှပြန်လည်မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ..
အချိုင်း October 13, 2011 at 3:31 AM
အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ ပိုစ့်ကိုဖတ်ရင်းနဲ့ 
ကျနော့ ရွာက မိဘ ဆရာသမားများကို သတိရ တမ်းတ ရင်း ကန်တော့ဖို့သိတရားတွေ ချက်ချင်းရင်ထဲ ရောက်စေတယ်ဗျာ အဲဒီအတွက်ကျေးဇူးအထူးပါခင်ဗျာ
Hard Disk ကိုကိုယ်တိုင် Partation ခွဲကြရအောင်
LAN LOCAL AREA NETWORKS Connection2( Movie )
TuneUp Utilities 2012 + Serial keys ( Update )
cFosSpeed 6.61 Build 1895 Beta Multilingual
IOS Skin Pack 1.0 For Window7X64/X86
Gnome Skin Pack 1.0 for Windows7(x86/x64)
Corel VideoStudio Pro X4 v14.0.0.342 + Video Tutor...
Android_skin_pack လန်းလန်းလေး သုံးချင်သူများအတွက်...
SRS Audio Sandbox 1.9.0.4 + Patch
Photo Scape Full Download
Windows 8 Skin Pack 2
Toshiba Satellite A300 Series ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင...
U-Torrent Downloader ကို Download Speed မြှင့်ပြီး...
Animation Screen Saver အလန်းလေးတွေ ( ၁ )
U-Torrent Downloader အားအသုံးပြုနည်း
Photoshop Top Secret Video Tutorial - DVD 5
Aneesoft 3D Flash Gallery Full Version
AutoCAD 2012 Full download ( 32 Bits and 64 Bits ...
Photoshop Top Secret Video Tutorial - DVD 4
ကျွန်တော် ရှာဖွေထားသော Windows ခွေများ (3)
ကျွန်တော် ရှာဖွေထားသော Windows ခွေများ ( ၂ )
ကျွန်တော် ရှာဖွေထားသော Windows ခွေများ ( ၁ )
Windows7Manager v3.0.2 (x86 & x64)
Driver တွေကို အလွယ်တကူနဲ့ ရှာကြရအောင်
PC Optimizer Pro 6.1.4.5 + Patch
Autodesk 3ds MAX 2010 (x86/64)
Babylon Pro 9.0.3 r14 ( FULL VERSION -- NO CRACK ...
Install or Uninstall Programs From Safe Mode ( Mov...
Myanmar Window ကို Virtual Box နဲ့သုံးရအောင်
PhotoInstrument 5.2.531 Multilingual (+ Portable)
Keys for Kaspersky, Dr. Web, ESET NOD32, Avast, Av...
AKVIS Lightshop 3.0 Multilingual for Adobe Photosh...
Platinum Hide IP 3.1.2.6
Backup & Restore Emails in Outlook Express ( Movie...
အဆင့်မြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဓာတ်ပုံပညာ ( E-Book )
Microsoft Visual Basic6အသုံးပြုနည်း ( E-Book )
HTML and CSS ဆိုင်ရာ E-Book များ ( မြန်မာပြန် )
Clear Glass7for Windows7(x86/x64)
Screen Saver Collections
IVT BlueSoleil 8.0.338.0 + Serial
Rizone Memory Booster 1.7.7.1.773
Memory Cleaner 1.50
QuarkXPress.v8.16 Xperience Design + Keygen
Computer မှာ ( 7.45 GB ) Free သုံးချင်တယ်ဆိုရင်
How To Create A WiFi Connection WITHOUT A ROUTER i...
Windows Explorer has stopped working Error ဖြေရှင်...
VSO Blu-ray to PS3(PlayStation) 1.2.2.8 Multiling...
Windows 8 မှာ Start Menu Bar ထည့်ချင်ရင်
UltraISO PE 9.5.0.2800 Multilanguage
Skype 5.6.0.110 Final (+ Portable)
TuneUp Utilities 2012 Build 12.0.2012.117
Snow Leopard for Windows7FINAL (x86/x64)
Bootmgr Is Missing Error Vista ဖြေရှင်းနည်း
Various Screensaver Collection Vol.2
AVS Image Converter v2.1.1.168
MyPC 2.10.0.0 Portable
VLC Media Player 1.2.0 Nightly Multilanguage (13.1...
Dll Errors များဖြေရှင်းရန်
d3dx9_39.dll error ဖြေရှင်းရန်
WinUSB Maker 1.0 - Windows Setup to USB Solution (...
G-Mail အကောင့်လွယ်လွယ် ဖောက်ရအောင်
USB Drive လန်းလန်းလေးများ
Internet Download Manager ရဲ့ Speed ကိုမြှင့်ပြီး ...
Make Your Windows Genuine in5seconds
Yamicsoft Windows7Manager v3.0.1 Final (x86/x64)...
Blog Spot မှာ Comment Box လန်းလန်းလေးသုံးရအောင်